Uthando yimizwa engcono kakhulu umuntu angayithola. Wonke umuntu unamandla othando. Akekho umuntu oyedwa eMhlabeni "ongazi ukuthi kanjani", nalokhu kuzalwa. Lo mzwa ongaqondakali futhi ocacile owela phezu kwekhanda lakho, ukhululeke futhi uphumele ngaphandle, lo mzwelo, ungalawulwa yingqondo, futhi uzwela ngenhliziyo. Uthando aluthathi, alukho imingcele engekho ubuhlanga, hhayi yobudala, hhayi indawo.
Nakuba kungenzeka ukuphikisana mayelana nobuhlobo obuseduze. Njengoba umkhuba ubonisa, ubudlelwane obuseduze bukhona kunokungabi njalo. Abaningi abakholelwa ukuthi uthando olunjalo lukhona nhlobo, abaningi bathi akukho ubuhlobo futhi ngeke kube khona. Kungenzeka yini ukuthi umuntu osesimweni eside esivela othandweni lwakhe uyakuthanda, njengokungathi akahlanganyeli nabathandekayo bakhe? Ekuphileni, noma yisiphi isimo kungenzeka. Ezinsukwini zethu ezinzima, ngokuvamile, amadoda achitha isikhathi eside emndenini, ezama ukuthola imali. Yebo, uthando nobudlelwano bahlala, kodwa umndeni usukhona? Phela, lokhu kuyimfundo ehlangene yabantwana, okungenakwenzeka ngaphandle kokuhlala njalo kwendoda nomkayo. Ingane kufanele ibone ukuthi bobabili abazali baseduze - kuphela kulokhu umndeni ungabizwa ugcwele. Okuhlangenwe nakho kubonisa ukuthi imindeni enjalo, lapho umzali oyedwa engasekho khona isikhathi eside, izokwenzeka ngokushesha noma kamuva.
Eminye imibhangqwana eyaziwa ngokuya ebuhlotsheni kude, manje kuyisiko ukubiza umshado wezihambi. Ngokusho kwabo - ukuhlala ndawonye isikhathi eside kubulala imizwa, futhi impilo nokuthula kudla iholide lokuphila. Ngakho-ke, inani nenhlonipho komunye nomunye lilahlekile. Emibhangqwaneni eminingi, ne-worldview evamile, lolu hlobo lobuhlobo aluqondakali, ngakho-ke alwamukeli. Uthando luhlala ebuhlotsheni obunjalo, nakuba kumabhangqwana amaningi akuqondakali.
Futhi ukuhlukahluka okunjalo kothando ekude ukuphila kusihola izibonelo eziningi. Kuphela ukuthi ungavumelanisa kanjani nomqondo wokuthi othandekayo wakho ulala ngokwehlukana futhi awukwazi ukuwahlonipha, ukumboza ngengubo efudumeleyo, lapho elala phansi ukuze afunde iphephandaba futhi alele ngokuqinile, ephihliwe njengengane encane. Mhlawumbe udinga nje ukuthatha futhi uqonde ukuthi akuyona into ebulalayo. Umuntu owabonayo nsuku zonke owakhathalelayo ngeke abe khona okwesikhashana. Kodwa kukho konke okudingayo ukubheka izinzuzo! Ngakho-ke, uzoba nesikhathi esiningi samahhala, ongawasebenzisa ngenzuzo yokubukeka kwakho noma unikele ngomzuzu wamahhala kuzihlobo noma kubangani.
Iqiniso lokuthi awukwazi ukubonana akusho ukuthi ngeke ukhulume. Esikhathini sethu, iminyaka yobuchwepheshe obuphambili, kunezindlela eziningi zokugcina ukuxhumana. Ukuhlukanisa nawe, njengangaphambili, kungabelana nakho okuhlangenwe nakho kwakho kanye nokuhlangenwe nakho okusha empilweni yakho.
Ngokwehlukana, umbuzo ovulekile ebuhlotsheni, yinkinga yokwethemba. Uma kwenzeka ukuthi ibanga eliphakathi kwakho lizinqunywe izinyanga kuphela, kodwa ngisho neminyaka, kukhona ingozi yokukhaphela, hhayi ngoba uthando seludlulile, kodwa ngoba ukusondelana ngokomzimba kuyinkqubo yemvelo yemvelo. Lokhu kungaphumeleli okukhulu ebuhlotsheni kude.
Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi ubudlelwano obude kangakanani, kungenzeka ukuthi kubanjwe umbhangqwana ngamunye ukuba unqume. Ukuhlukanisa isikhathi eside, umhlangano ujabulise ngokwengeziwe, ophenduka iholidi langempela lababili abanesimo sengqondo esivela emizwa eqoqwe. Futhi inani lentengo lomunye nomunye liphakeme kakhulu. Futhi mhlawumbe ukuhlukanisa, lokhu kuyisivivinyo samandla. Ngemva kokungabikho isikhathi eside, kungaba nzima ukujwayela omunye nomunye. Ngakho-ke sakha uthando lwethu nenjabulo.
Ubuhlobo obuvumelana phakathi kwendoda nowesifazane
Indlela yokubhekana nesithando sothando?
Uthando luyisipho, ukuphikisana kwamakhemikhali, noma inkolelo nje?
Izindlela zokupheka ezimbili zesaladi eziphundu nge shizi elibhemayo
Iphunga le-Stuffy ezinsana ezisanda kuzalwa
Indlela yokujwayela i-parrot ezandleni zakhe?
Imithetho yokukhohlisa amadoda embhedeni
U-Ksenia Sobchak ubeke amazwana ngamazinga phansi kwezingane zakhe ezizayo
Amathuluzi amathathu asebenzayo futhi angabizi ekulwa nokukhuluphala ngokweqile
Ukunikela kwesandla nenhliziyo
Indlela yokubukeka enhle ngaphandle kokuchitha imali eningi kulezi zinguquko